Sevhisi - Suzhou Funncycle Intelligent Technology Co, Ltd.
Sebic inotarisa kuvandudzwa uye kugadzirwa kwemotokari dzemagetsi, uye yakatsunga kukupa yakanakisa sevhisi.
Saka tinganzwisisa sei zvaunoda?
Chekutanga, bhurawuza zvigadzirwa zvedu uye sarudza yako yaunofarira modhi.
Ipapo,tsvaga kubvunzurudzwa kwevatengi mukona yezasi yekurudyi rwe peji uye isa pamberi zvaunoda. Isu tinotaurirana nekambani yeR & D timu uye tinopa seti yemapurani. EBIKE, Chigadzirwa kugadzirisa
Isu tiri kambani inoshumira vatengesi nevatengesi. Kana chiri chidikanwi chedu, isu dzimwe nguva tinovhura vanhu vazhinji kuwana mari. Kana iwe uchifarira, ndapota nyoresa senhengo yedu uye uteedzere yedu facebook account.
Iwe une mutsva chigadzirwa chigadzirwa?
TINOGONA KUZVIITA MUKAMU YEDU
MUUMBI UYE ZVINOKOSHA
Vanhu vazhinji vanobvunza kuti sevhisi nechengetedzo ipi inodikanwa kumhanyisa iyo Magetsi bhasikoro (eBike). Heano rumwe ruzivo rwekutanga uye matipi akajairwa ekuchengeta yako eBike inomhanya sehope!
Kungofanana nechero ipi neipi yenguva dzose kutenderera, yako eBike iri kuzoda kugara uchigadziriswa. zvisinei usabviswe nechikamu chemagetsi cheichi sezvo kazhinji zvichizoda kuchengetedzwa kushoma.
Vazhinji vasiri-eBikers vanotenda emabhasikoro emagetsi akazadzwa nenyaya dzekuchengetedza, asi izvi hazvisi zvechokwadi. Kana iwe, mushandisi, utora matanho ekutanga kuti bhasikoro rako rimhanye harizodi zvakawanda kupfuura bhasikoro rakajairwa. Mushure mezvose kana iwe uchibata yako eBike mushe zvinokubata iwe zvakanaka mukudzoka.
Vatengesi vazhinji vanozopa iyo yakazara seti pabhasikoro, izvo zvakakosha sezvo eBike inoda kumisikidzwa nenzira chaiyo munzvimbo yekutanga kuti ishande zvakanaka.
Vamwe vatengesi vanopawo imwe yemahara sevhisi kana iyo eBike yapinda mubhedha mukati. Izvi zvinobatsira uye zvakakodzera kutora mukana sezvo zvichigona kutora mamaira mashoma kumabhaudhi matsva kuti arare mukati, tambo kutambanudza nezvimwe Nokuitora shure mushure mekurara mukati nguva iwe unogona kuti dzisimudzwe dzese, uye mabhureki nemagiya akatariswa etc. Iyi zvakare inguva yakanaka yekushandura chigaro chisina kugadzikana zvinotyisa, kumisa mabhawa zvishoma zvakasiyana uye kuita chero imwe shanduko diki kuti upe kufamba kwakanaka.
Kuti uwane hupenyu hwakarebesa kubva muEbike yako unogona kutora matanho akareruka ekuzvichengeta iwe, pasina nzendo dzenguva dzose kumutengesi. Heano mamwe emazano ezvekutenderera ekukubatsira iwe pamwe -
- Chengeta yako eBike yakachena. Kana zvichibvira chenesa mushure mekufamba kwega kwega neicho bhasikoro yakachenesa.
- Usashandise jet wash kana zvakafanana sezvo izvi zvichikwanisa kudzora mafuta ekuzora mabheyaringi, inozomanikidzawo mvura mukati mevashandi iyo inozokanganisa zvakakosha zvinhu.
- Kana uchishandisa hosipaipi yakakwenenzverwa chenjera kuti usaise jeti mvura padhuze padyo nemahubhu, bracket yepasi, mahedhifoni kana chero kumwe kunowanzozorwa mafuta mukati mese.
- Mimwe bhasikoro inopenya zvigadzirwa zvinogona kusiya dziviriro pamusoro pekupenda, zvichibatsira kuchengeta yako eBike kutaridzika senge nyowani kwenguva refu. Ive nekuchengera kuti usasvitse zvinhu izvi padhuze nechero mabhureki madenga nyangwe!
- Shandisa yakakora cheni yemafuta kuti cheni iiswe mafuta mushure mekuchenesa, ita shuwa kuti haina kusiiwa yakaoma. Wet lube munguva yechando uye yakaoma lube muzhizha. (Mvura lube inoramba yakanyorova, yakaoma lube yakaoma).
- Unogona kukanda tambo nemwenje mwenje mafuta, kunyanya imwe inooma uye inosiya PTFE dura. Kana uchishandisa lubricant iyo inogara yakanyorova, pane yako inotevera kubuda guruva inogona kunamatira kune izvi zvichikonzera mamwe matambudziko uye inogona kukonzera tambo kubata. (Iine PTFE ichaoma asi ichisiya girisi rekuzora).
- Kana bhasikoro risiri kushandiswa edza kurichengeta munzvimbo yakaoma kunze kwezvinhu.
- Chengeta matai akaguta zvakanaka. Izvi zvinodzivirira isina kukwana tai kusakara. Izvo zvakare zvichaita kuti hupenyu hwako huve nyore sezvo bhasikoro rinotenderera nekushomeka kushomeka. Naiwo mota iri kushanda zvishoma uye huwandu hwakatambanudzwa. Izvi zvinogona kuita mutsauko kupfuura iwe zvaungafunge. (Zvinomanikidza zveTire zvinogara zvichidhindwa kudivi redaya rako).
Motokari & Bhatiri Kugadziriswa
Mota zhinji mazuva ano dzinenge dzakasungwa kana kusashandira, nekudaro kana zvikakanganisika zvaizotsiviwa pane kugadziriswa, saka kushoma kugadziriswa pano.
Izvo zvakafanana nemabhatiri; zvisinei iwe unogona kutora matanho ekuwedzera hupenyu hwebhatiri rako. Semuenzaniso kuichengeta yakakwenenzverwa, kwete kuisiya ichidonhedza kwenguva yakareba, kusaisiya muzuva rinopisa kwenguva yakareba uyezve kusaisiya iri muchando chinotonhora kwemwedzi yakawanda kana isiri kushandiswa. Matambudziko mazhinji ebhatiri andinosangana nawo ndimo mune vanhu vakaregeredza mabhatiri avo, kana kuvasiya kwemakore nemakore vasati vadzoka kwavari vachitarisira kuti vashande sezvavakaita apo nyowani!
Nemasero mazhinji emazuva ano eLithium zvirinani kuti bhatiri riwedzere kumusoro. Saka kunyangwe iwe ukaenda chete kwenguva pfupi mamaira gumi mumugwagwa, zvine hutano kuti bhatiri rikwidziridzwe mushure meicho kukwira kupesana nekurega richimhanya chaiko nekuchaja ichidzosera kumusoro kumusoro.
Kana bhatiri racho richiita kunge riri kuramba richidzikira, kugona kwacho kunogona kutariswa nechitoro chakatsaurwa cheBike. Iti semuenzaniso bhatiri rinotonhorera zvakanyanya kana iwe ukarisiya mushedhi kwenguva yakareba, rinogona kubatsirwa kubva pane yakazara mamiriro ekutenderera. Kuti uite izvi mhanyisa bhatiri rakadzika zvakakwana uye wachaja iro kurudyi kumusoro. Izvi zvinofanirwa kugadzirisa bhatiri kudzokera kudunhu. Zvinogona kunge zvakakodzera kuzviita kaviri kuti uve nechokwadi.
Bhatiri mapakeji anogona kuve akaumbwa nemaseru mazhinji uye dzimwe nguva aya maseru anova asina kuenzana. Mazhinji mabhatiri emazuva ano anozvichengetedza iwo akaenzana nenzira kwayo, aine bhodhi BMS, (Battery Management System) zvisinei zvinokwanisika kubhadharisa maseru ega ega kuti aenzanise iwo ese. Izvi zvinofanirwa kuitwa neyakavimbika eBike shopu nenzira kwayo.
Matambudziko Emagetsi, zvekuita?
Kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge ukaita Ivo vanofanirwa kuve neruzivo rwekubatsira iwe.
Kana iwe usati uine ruzivo, usatore chero ekepi magetsi kupatsanura. Usabvise chero mapurasitiki epurasitiki sezvaunogona kukuvadza vari mukati uye zvakare kuita kuti mararanti asashanda. izvi zvinofanirwa kuitwa neye eBike tekinoroji.
Kana iwe ukasarudza 'fiddle' ita shuwa yekuve nemagineti tireyi kana imwe nzira yekuisa mabhaudhi nezvimwe sezvo mabiti anogona kudonha paunenge uchivhura kesi.
Nguva dzose zvakanaka kuisa zvikamu kunze nenzira yawakazvibvisa; nenzira iyi unenge uine zano rakaipa rekuti zvese zvinodzokera sei pamwechete.
Usati wadzokera kumutengesi iwe ungangoda kutarisa zvinobatanidza magetsi: inogona kunge iri dambudziko riri nyore. Iti warova bundu rakaoma mumugwagwa uye simba rinodimbuka, tarisa bhatiri rakachengeteka munzvimbo sezvo ringave rakafamba zvishoma pane chinobatanidza zvichikonzera kurasikirwa kwechinguva kwekubatana.
Iwe unogona zvakare kuve nechokwadi chekuti vese vanobatana vakachena uye ngura mahara.
MaEbikes mazhinji emazuva ano ane board diagnostics yekuudza mutengesi izvo zviri kuitika kana paita dambudziko. Mamwe marongero akareruka inyaya yekubvisa, uko chikamu chimwe nechimwe chinoyedzwa kudzamara chikamu chisina kukwana chaonekwa.
Dzimwe nguva zviri nyore sekushandura iyo eBike kudzima uye kumashure. Kuita izvi kuchagadzirisa mutongi uye kunogona kukuita kuti uende zvakare.
Ive nekuchengera zvakadaro, kuti nekumisazve, zvinoreva kuti paive nedambudziko uye iwe unofanirwa kunge uchiri kuzviongorora neanoshanda eBike.
Mamwe maEbikes akavimbika kupfuura mamwe uye dzimwe nguva unongoita rombo rakaipa; ita zvaunogona kuti utarisire kudada kwako uye mufaro, uye uchafadzwa makore mazhinji eBiking anofara.
Zvichitaurwa zviri nyore: Iyo eBike chaizvo haifanire kuda chero imwe yekuchengetedza kupfuura yakajairwa push bhasikoro, chero bedzi iwe uchizvibata nenzira kwayo.
Nemhando dzakasiyana dzakasiyana, mamodheru & mitengo yemitengo, kutenga bhasikoro remagetsi (eBike) inogona kuita inotyisa.
Kuti ikubatsire iwe mukutsvaga kwako, ini ndaisa pamwechete gwara rakaomarara rekukubatsira iwe kuita sarudzo yekuti ndeipi eBike ichave yakanakira iwe. Iyi ndiyo giraidhi yevatengi bhasikoro yemagetsi ..
Panzvimbo pekukuremedza iwe nezvakanyanya kuwanda, mazwi anotevera ari 'Jargon Yemahara' uye anofanirwa kuita zvine musoro kunyangwe iye mucherechedzo wevatasvi, iri nyore gwara rekuvhara zvakakosha zvinhu.
Pane zvakawanda zvekuvhara saka ndakazvipaza muzvikamu zvinoverengeka:
Maitiro eMagetsi Bike
Sarudza chaiyo dhizaini eBike kutsigira yako maratidziro ekukwira.
Iyo eBike musika yakakura zvakanyanya pamakore mashoma apfuura uye iine iyo yakawanda yemhando dzakasiyana masitaera, dhizaini uye zvinangwa.
Kutangira kubva kumavhiri madiki ekupeta emabhasikoro kuenda kune makuru mavhiri vafambi; pane angangoita ese masitayiti eBike iyo yekupedzisira mushandisi ingangoda.
Kuti uwane iyo chaiyo eBike iwe uchafanirwa kufunga zvakanyatsonaka nezve izvo zvaunoda uye zvaunotarisira zviri:
- Kana iwe uchitsvaga eBike diki zvakakwana kuti unamatire kumashure kwemota, yekupeta eBike ndiyo mhinduro.
- Kana iwe uri kuenda kubasa utarise kune iro dhorobha / commuter eBikes kunze uko.
- Kune vakazvitsaurira-munzira kune akasiyana masitayera eMTB anowanikwa.
- Kuenda kunoshanda mukati mevhiki asiwo mushure meimwe mwenje kubva-munzira pakupera kwevhiki? Iyo yakasanganiswa eBike ichave chaiyo kumusoro kwako mumugwagwa (uye yekudhonza-nzira).
- Mamwe akawanda niche masitayera anowanikwa; kubva kuTrikes kusvika kune yakazara macarbon mujaho michina
- Ive neshuwa yekutora ese masitayera uye usability kuverengera kana uchitsvaga yako eBike: Ipo folding eBike ingaite senge inoshanda sarudzo, kana iwe uri kuronga pane marefu majeji ane asiri-emumigwagwa zvikamu zvingangotadza kukodzera kwako kukwira zvaunoda. Zvichida tarisa mune rakakodzera mota rack panzvimbo.
Pakupedzisira chero eBike yaunosarudza iyo inoda kukodzera zvaunoda. Iwe unofanirwa kufunga nezve zvinoita pakati peakasiyana maEbikes.
Semuyenzaniso: Unogona kunge uri kutarisa kune diki mavhiri kupeta bhasikoro kuenda kumashure kwemotokari, asi usatonge kunze kwakakura mavhiri asiri-ekupeta maBikes; iyo folda inogona kuve inoshanda kupeta nekuchengetedza, asi kana iyo eBike isingashande munzira yako yekutasva saka haukwanisi kuitasva, uye pakupera kwezuva kukwirwa ndiko kwakanyanya kukosha chinhu.
Mutengi wese wandinoona ane zvakasiyana zvinodiwa. Vamwe vanogona kunge vasinganyanye kukurumidza uye vanoda kutenderera uko kwakagadzikana uye kuri nyore kuenda nekudzika. Muchiitiko ichi bhasikoro rinodonhedza iro rinobvumira kuvimba kwakanyanya kana uchichovha bhasikoro, uye kana chiitiko chekumira kamwe kamwe kuchikubvumidza kuti utsike tsoka dzako zvakachengeteka uye nekukurumidza, chingave chisarudzo chine musoro. Usatarise bhasikoro uye ufunge 'Izvo zvinoita kunge bhasikoro remadzimai', tarisa pairi uye funga nezvekuti zvichakubatsira sei.
Izvi ndizvo zvinhu zvekupedzisira zvaunokwanisa kuayina uchiedza mabhaisikopo (chimwe chinhu chatinobata gare gare muchinyorwa) asi zvinokodzera kufunga kunyangwe mumatanho ekutanga ekusarudza eBike yako.
Yakabatana zvakanyanya neakataurwa pamusoro uye akakosha kusarudza iyo chaiyo eBike; kuve nechokwadi chekuti une chaiyo vhiri saizi ichavimbisa zvese kushanda pamwe nekunakidzwa muzvikamu zvakaenzana.
Iwe unofanirwa kuve neruzivo rwekuti ndeyipi dhizaini reBike rauri mushure mezvino, asi ndeapi mutsauko mukukura kwemavhiri uye ndeapi akasiyana mafomu avanayo?
Iye zvino zvinogona kunge zvichimhanya padiki kuti uone saizi asi ini ndaida kunongedzera izvi izvozvi sezvo saizi inogona kukanganisa maitiro eEbike auri kutarisa pakutenga. Saizi chaiyo inofanirwa kuve chimwe chezvinhu zvekupedzisira kutarisa asi; Ini ndinotaura kune vanhu vazhinji zvekuti mushure mekutaura nezve maEbikes kwemaminetsi mashoma bvunza - "Ndeupi saizi yandinoda?".
Panguva ino saizi haina kukosha asi iwe unofanirwa kufunga nezve akasiyana mavhiri saizi aripo. Mumazuva ekare kwaingova newiri kana maviri saizi yemavhiri aivapo. Asi ikozvino sezvo musika waenderera kumberi kune yakawanda yemhando dzakasiyana saizi kusarudza kubva.
Ini ndichatarisa pane iwo mashoma mashoma pasina kupinda mune zvakawanda zvakadzama.
700c: Iri 'vhiri hombe' rinowanzo shandiswa pamugwagwa basa. Iyo dhayamita yakakura inovhara nhambwe zhinji painotenderedzwa mushanduko yakazara pane vhiri diki.
700c inoonekwawo pamabhasikoro mazhinji ekufamba-famba / emahara sezvo achigona kushandiswa zvese munzira nekunze, nemusiyano mukuru kuve sarudzo yematai: vhiri remasanganiswa rinenge riine muviri wakapamhi zvishoma pane yakazara tirairi remugwagwa, nemhando dzakasiyana dzekutsika uye mapatani kuti akwane iwo maitiro ekutasva.
29 ”mavhiri eMTBs (kana 29ers) ari kuwedzerawo kuve akajairika, achibvumidza kugona kumwechete kwekunyaradza uye kunyaradza kune vashandisi vasiri munzira.
26 ": Humwe hukuru hwakakurumbira ndiro 26" vhiri. Inowanzo shandiswa kugomo kuchovha, vhiri iri idiki asi rinobvumidza kuwanda kudzora uye kushoma vhiri inoshanduka kubva-munzira kupfuura hama yayo hombe.
Ivo vanowanzo kuve nehupamhi, knobbier tai yekukwirisa kubata uye kubata mumamiriro akasviba. Izvo zvakati, zvakajairika mazuva ano kune vagadziri vanoshandisa vhiri makumi maviri nematanhatu paguta / mutyairi bhasikoro rine mutserendende wemumugwagwa dhayi uye kumanikidza kwakanyanya kwetaya. Izvi zvinobvumidza iyo eBike kuti iwedzere kugadziriswa nemabatiro akareruka asi isingakanganise kumisikidza kupokana nemahombe makuru emota mumugwagwa. Izvo zvakare pakupedzisira inoderedza iyo nzvimbo yegiravhiti zvakare kuti ive inogona kuve yakakodzera kune vashoma vashoma vashandisi.
20 ”: Uchawana izvi pamabhasikoro mazhinji ekupeta, uko mavhiri madiki anobatsira kuchengetedza saizi yakazara pasi.
Izvo zvakakosha kuti urangarire kuti iyo diki saizi vhiri, iyo diki nzvimbo iyo ichafukidza mune imwe shanduko, iyo inogona kuitisa kuti riwedzere basa pane mamwe marefu kukwira.
Kune mamwe akawanda mavhiri, asi aya ndiwo akajairika muiyo eBike nyika.
Ndekupi kwekuisa bhajeti yako?
Yako bhajeti chinhu chakakura mukuvhima kwako eBike. Nemitengo iri nyore kusvika muzviuru, iwe unofanirwa kuve wakagadzirira kubhadhara zvishoma kune eBike pane yakajairwa pedal kutenderera.
Mabhasikoro emagetsi anogona kutenga chero chinhu chinosvika pa- $ 10,000 + asi zvichinyatsoitika hazvo mazhinji acho anotangira pamadhora mazana masere uye anotanga kusvika paUS $ 6000.
Iyo yekuwedzera tekinoroji mumotokari uye bhatiri inomanikidza mamwe maprimiyamu pamusoro pemutengo webhasikoro rakajairwa.
Izvo zvakanaka ndezvekuti sezvo tekinoroji ichifambira mberi uye nemitengo yepasi ichiderera, iwe unowana iwe uchikwanisa kutora muchina unovimbika wemari isina mwero.
Sezvo nezvose zviri munyika ino unobhadhara izvo zvaunowana, uye zveeBikes izvi zvinoreva kubhadhara zvakanyanya kunaka, huwandu uye kuvimbika.
Ehe usabhadhara yakawanda kune chimwe chinhu chausingade; zviri nyore kuti utakure kutsvaga kwako. Musika weBike wakakwikwidza zvakanyanya; kana imwe ichidhura kupfuura imwe zvinowanzove nechikonzero. Kana iyo eBike yakaunzwa kumusika yaive yakadhurirwa mutengo yaizoonekwa nekukurumidza uye iye anogadzira anozowana zvakaoma kutengesa.
Gadzirira bhajeti rako kushanduka zvishoma, kana imwe eBike yakati rebei kupfuura bhajeti rako asi ichizoshanda basa riri nani pakuita izvo zvaunoda kuti usazviita.
Kubaira usability uye basa nekuda kwebhajeti kunogona kupedzisira kuchidhura kuwedzera pasi pemutsetse mukugadzirisa uye kutsiva.
Tarisa tarisa uchitenderedza uye enzanisa eBikes pamitengo yakasiyana yemitengo usati wafunga nezve bhajeti yekupedzisira. Usatonge chero chinhu kunze. Iva anochinjika.
Rangarira iwe unowana chaunobhadhara, asi usatengeswe pamabasa anodakadza nekuda kwayo.
Midziyo yakakosha uye zvakare inodzokera kubhajeti rako rese. Unogona kunge wakaisa mufananidzo kumusoro mupfungwa dzako semuenzaniso woti £ 2000, iwe parizvino ungave waona bhasikoro iwe rauri kutarisira kuwana. Asi chinhu mune zvishongedzo zvakaita seheti, magurovhosi, zvipfeko zvekudzivirira, mabhegi, shangu nezvimwe. Izvi zvinhu zvinogona kuwedzera kumusoro!
Izvo zvakare zvakakosha kuisa muzvinhu zvakaita semadhigadhi, mwenje, maraki, kukiya etc. Unogona kuwana kana semuenzaniso iwe uchida bhasikoro rekuenda, mamwe mamodheru anogona kunge atouya nemabhititi akaita seanochengetedza matope, mwenje uye rack yakaiswa seyakajairwa. Izvi zvakanaka, sezvo mugadziri akanyatso sarudza zvakanakisa zvikamu zvebhasikoro uye basa riri muruoko. Zvinogona kuve zviri nani kwazvo kupfuura zvapashure-musika zvinowedzerwa pane rimwe zuva, zvinogona zvakare kuve zvakachipa kutenga bhasikoro rakagadzirwa nezvikamu izvi.
Zano rangu raizove rekuseta mabhajeti maviri, rimwe bhasikoro pacharo uye rimwe rezvinhu zvekushandisa, nenzira iyi hausi kuzipira kune chero magumo. Zviripachena zvimwe zvinhu zvinofanirwa semuenzaniso ngowani. Asi rangarira zvimwe zvezvinhu zvaunogona kutenga kana kukwidziridza pane inotevera zuva, uchibvumira bhajeti yako kuti ive inochinjika pari zvino. Nekuita izvi unodzivirira kutenga zvinhu zvaungangoda uye nekufamba kwenguva iwe unozoona zvimwe zvakakosha izvo iwe zvaunoda.
Mhando dzeMota, Kukura kweBattery & Range
Ini handizonyore zvakanyanya mubhatiri rakasiyana nemhando dzemota sezvo izvi zvichizofukidzwa mune imwe chinyorwa; zvisinei zvirokwazvo ndechimwe chinhu chekutarisa kana uchitenga bhasikoro remagetsi.
Kune maviri akakosha mhando dzemotokari pamusika: Hub drive uye crank drive, uye vanoshanda nenzira dzakasiyana.
Hub drive idhiraivhu yakaiswa pamberi kana kumashure vhiri. Sezvo mushandisi anofambisa bhodhi rinodzora rinoshandisa simba kubva kubhatiri. Izvi zvinobva zvasundidzira mushandisi kubva kune vhiri rekumashure kana kukudhonza iwe kubva kumberi vhiri. Kubatsira kweiyi sisitimu ndeyekuti unomhanyisa mota dzakakwira-dzinowirirana kuti dzikodzere nzira yako yekutasva. Iwe unogona kazhinji kuchinjisa mota kuti ushande nevatungamiriri vakasiyana uye mabhatiri, saka zvinowirirana mukushanda kwayo.
Crank drive ndipo panokwirirwa mota yakanangana mufreyimu uye inotyaira pacheni yacho pachayo. Iyi sisitimu inoshanda zvakanyanya sezvo mushandisi ari anogara ari mumagetsi akakwana padivi peyuniti mota kana achifamba kumberi uye kazhinji inoda bhatiri diki kuti rishande.
Sezvo mota yakakwidzwa pakati nepakati pabhasikoro hazviite kuti kumberi kana kumashure kwekupedzisira kwebhasikoro kuve kunorema. Imwe bhenefiti ndeyekuti inogona kuita zvirinani mune inotsvedza mamiriro, sezvo paine mukana mushoma wevhiri kutenderera sezvo simba richiiswa. Iko kune kushoma 'kufashukira' uye iyo torque inoiswa zvakanyanya zvakaenzana kuburikidza nehurefu.
Yako bhajeti inogona kuve chinhu chakakura kana uchifunga kuti ndeipi mhando yekutyaira yekuenda. Crank inotyairwa mabhasikoro anowanzo kuve anodhura kupfuura iyo hub inotya imwe nzira, kunyangwe paine nyowani crank drive mota dzinouya kuzotengesa nguva dzese uye ini ndaona mamwe mabhajeti crank drive mabhasikoro ave kuwanikwa. Kana kuvimbika kuri iko kiyi; saka pamwe enda nechimwe chinhu chakaedzwa uye kuyedzwa pamusika kwechinguva. Kwandiri pachangu ini ndinongotengesa crank drive mabhasikoro, ndiwo mamwe masisitimu akavimbika pamusika, mumaonero angu ini ndinosarudza nzira yavanonzwa kana ichishandiswa, iri yakanyanya kutyaira yakasarudzika isina kuwanda zvishoma uye ndinotenda vanoita zvakawanda zvirinani kunyange makomo marefu kwazvo.
Kubheja kwako kwakanyanya kuyedza ese masisitimu uye uzvionere wega, ndeipi inoita zvirinani pane zvaunoda. Usakanganwa kuyedza bhasikoro remagetsi kukwira gomo rakaomarara!
Kana zviri zvemabhatiri, ichi chingangove chiri chikamu chinokurumidza kupfuura chebhuku, ine matekinoroji matsva anouya kuzotengesa nguva dzese. Kune mhando dzakawanda, inonyanya kufarirwa kuve iyo lithiamu maseru. Aya akareruka kupfuura ekare maNi-cad mabhatiri, uye kazhinji anogara kwenguva yakareba kwenguva.
Zvekare iyi imwe imwe nyaya vese pamwe chete uye ichatsanangurwa zvakadzama mune imwe chinyorwa.
Iyo yakakura kukura kweye bhatiri iyo yakawanda renji yarinobata.
Iva wechokwadi nezvekuti mangani mamaira auchange uchivhara, nekuti paunenge uchikwira kumusoro iyo inorema uye bulkier bhatiri inogona kuve. Rangarira, iwe semutasvi uchave uchitakura huremu hwakatenderedza. Nguva nenguva ndinotaura kune vatengi vanoda iyo 'hombe bhatiri' nekuti pabepa iro rakakura kugona riri nani. Nekudaro kana ini ndikabvunza - "Chokwadi uri kuita mamaira mangani?" Kazhinji hazviite kana 50% yemabhatiri akazara akaenzana. Izvo zvakati zvinogara zvakanaka kuva nezvakawanda zvakasara mumabhatiri renji kana uri kunze kwekutasva kuitira kuti uve nerunyararo rwepfungwa hausi kuzosara mupfupi.
Zano rangu raizoti: Usazvivhiringidze nekuverenga zvakawandisa pamusoro pedzese dzakasiyana mota mota nemabhatiri, chinhu chikuru chaunoda kutsvaga kushanda uye huwandu. Enda unoenda pane akasiyana masitaera, sarudza renji yako uye enda nezvinokukodzera zvakanyanya.
Iye zvino ichi chikamu chinonakidza! Ichowo chikamu chakakosha kupfuura zvese.
Iwe unofanirwa, ini ndinomanikidza UNOFANIRA kuenda woedza mashoma maEbikes usati waita sarudzo yako. Mushure mezvose kana ukasavaedza hauzoziva manzwiro uye mashandiro avo.
Nemhando dzakasiyana dzakasiyana kunze uko edzai mashoma, kwete imwe kana mbiri, asi VASHOMA kuwana muenzanisiro wakanaka. Ukasaedza akati wandei unogona kunge uchirasikirwa neiyo yakakwana kwauri.
Kana bvunzo kukwira:
- Edza iyo eBike mune akasiyana magiya uye akasiyana mazinga ekubatsira (kana iine sarudzo), uye mune akawanda mabatanidzwa sezvinobvira kuti iwe unzwe zvakanaka nezve bhasikoro.
- Hazvina kunaka kukwira kumusoro uye pasi pasi pakarongwa kuti uwane danho. Kwira chikomo chikuru chesodding, pamusoro pemapundu, enda uye ubve pane mashoma, simudza, inzwa huremu, edza magiya, mabhureki nezvimwe.
- Ipa iwo muyedzo wakanaka wepasirese kuve nechokwadi kuti unozadzisa zvaunotarisira.
- Edza imwe iri pazasi pebhajeti rako uye imwe iri pamusoro pebhajeti rako kuti iwe ugone kuona zvauri kuwana kune yako mari. Iwe unogona kuwana iyo yakachipa inokwana zvaunoda, kana iwe unogona kuwana iyo inodarika ichave ichikutsigira zvirinani muhupenyu hwayo hwakazara.
Izvi zvakare zvinokupa iwe mukana wekutaura nevatengesi; iwe unozodzidza zvimwe zvakawanda nenzira iyi pane kuzviverengera wega sezvinoita mutengesi nhasi muzuva. Wese mutengesi anozoti yavo eBike ndiyo yakanyanya kunaka, asi ivo vanofanirwa kukwanisa kukutungamira mberi nekunongedza maficha aungave usina kunge waona papepa. Nechikonzero ichi enda kune vashoma vevatengesi vakasiyana uye sarudza mupfungwa dzako wega iyo eBike yakakukodzera.
Tsigira & dzosera kumusoro
Tsigiro uye back-up zvakakosha pakutenga kwako. Izvi zvakare zvinotidzosera pakushanyira vatengesi vakasiyana kuyera avo vaunofunga kuti vanozokutarisira mukufamba kwenguva. Hazvina kunaka kutenga eBike nyowani kana ukaenderera pasi nemutsara iwe unomhanya ukava dambudziko uye usina rutsigiro.
Chigadziro chega chega chemugadziri chakasiyana; pfungwa huru ndeyekutenga chimwe chinhu chine rudzi rwevimbiso kana paita dambudziko. Iwe unowanzo kuwana zvakapatsanurwa vimbiso kune emagetsi zvikamu zveEbike, uye furemu uye zvikamu. Izvi zvinosiyana asi kazhinji unowana garandi yemakore maviri pamagetsi, uye makore mashanu kana kunyangwe warandi yeupenyu pafuremu nezvimwe.
Ita shuwa kuti iwe uverenge iko kudhindwa kudiki: Chivimbiso chemugadziri che "kukanganisa mune zvigadzirwa" chakasiyana zvachose kune "hapana quibble garandi".
Zvakare ndapota ziva kuti bhatiri rinogona kunge riine nguva yakatambanudzwa garandi padivi pechaji yekutenderera waranti. Semuenzaniso inogona kungove nemwedzi mitanhatu chete asi kana yakafukidza macircule akawanda kupfuura iyo garandi inoti haigone kugamuchirwa.
Ive nekuchengetera nezve vagadziri vanopa mashoma kwazvo kana mapfupi vimbiso, izvi zvinorira bhero mabhero kuti ivo pachavo havana kutenda mukuvimbika kwechigadzirwa.
Zvinenge zvese zvivimbiso zvinogumira sezvo, pakupera kwezuva, eBike chikamu chinofamba; mabhureti achapfeka nekufamba kwenguva uye bhatiri rinozopedzisira rasununguka kugona.
Zano rangu raizove rekutenga kubva kune imwe nzvimbo kwaunogona kudzokera kwairi kana paita dambudziko, uine imba yekuratidzira yaunogona kushanyira pachako pane kungoita mafoni mazhinji uye kukanganisa nezvekuputira bhasikoro uye kuridzosera kuti ridzoke. Pamwe tarisa kunzvimbo dzinogona zvakare kushandira bhasikoro rako kuti rirambe richikwira mukufamba kwenguva.
Sevhisi uye Kugadzirisa -
Zviripachena kuti chero eBike iri kuzoda kugara ichigadziriswa, zvisinei usabviswe nechikamu chemagetsi cheichi sezvo zvichinyanya kuda kushomeka.
Vazhinji vasiri-eBikers vanotenda kuti bhasikoro remagetsi rakazara nezvinhu zvekugadzirisa asi izvi hazvisi zvechokwadi. Kana iwe semushandisi uchitora matanho ekutanga kuti bhasikoro rako rimhanye, hazvidi zvinopfuura zvakati kuti bhasikoro rakajairika. Mushure mezvose kana iwe uchibata yako eBike mushe zvinokubata iwe zvakanaka mukudzoka.
Nekudaro izvo zvakakosha izvozvi ndezvekuchengetedza iyo bhasikoro yakachena. Ita shuwa kuti vese vanosangana nemagetsi vane ngura mahara. Zvakakoshawo kuti bhasikoro rese rishandwe uye nepazvinenge zvichida uye nekuchengetedza rekodhi rebasa rakasimba (Izvi zvinobatsira kana ukazombouya kuzotengesa eBike zvakare pasi mutsetse).
Vatengesi vazhinji vanozopa iyo yakazara seti pabhasikoro, izvo zvakakosha, sezvo iyo eBike inoda kumisikidzwa nenzira chaiyo munzvimbo yekutanga kuti ishande zvakanaka.
Mota zhinji mazuva ano dzinenge dzakasungwa kana kusashandira, nekudaro kana zvikakanganisika zvaizotsiviwa pane kugadziridzwa, saka kushomeka kudiki pano.
Zvichitaurwa zviri nyore, iyo eBike chaizvo haifanire kuda zvakare kugadziridzwa kupfuura yakajairwa push bhasikoro sekureba sekunge iwe - mushandisi anoibata nemazvo.